Tender Invitation - Department of Alternative Education
Curriculum Development and Equivalency
Quality Assurance, Accreditation, Monitoring and Evaluation
Education Technology and E-channel
Education Talk Shows
February 14, 2019 - 8:50 am | NEWS
ရုံးအမှတ်(၅၂) ၊ နေပြည်တော်
၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ်(၅၂)၊နေပြည်တော်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် နှင့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အတွက် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအား တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် –
(က) Lot(1)- စတူဒီယိုခန်းအကြီးစားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း(နေပြည်တော်)
(ခ) Lot(2)- Master Control Room, Post Production and
Playout System စက်ပစ္စည်းများ
(ဂ) Lot(3)- Outdoor Production System စက်ပစ္စည်းများ
(ဃ) Lot(4)- Transmission System စက်ပစ္စည်းများ
(င) Lot(5)- ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ
(စ) Lot(6)- ရုံးသုံးပရိဘောဂများ
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို (၂၂-၂-၂၀၁၉) မှ (၁၈-၃-၂၀၁၉) ရက်အထိ ရုံးဖွင့်ချိန် နံနက် ၉း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၃၀ နာရီအတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် တင်ဒါပုံစံများကို Lotတစ်ခုချင်းစီအလိုက် သတ်မှတ်နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါများကို (၁၈-၃-၂၀၁၉)ရက်နေ့ ညနေ ၄း၃၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာသို့ လာရောက်ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။သတ်မှတ်ကာလထက်ကျော်လွန်သော တင်ဒါများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၄။ (၂၂-၂-၂၀၁၉) ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီတွင် ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေး ဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ်(၅၂) ၊ နေပြည်တော် ၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် တင်ဒါရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
၅။ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘဏ္ဍာ) ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၀ ၊ ၀၉-၄၂၈၃၀၃၄၆၈ တို့သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ ထုတ်ယူရန်နှင့် တင်သွင်းရန်လိပ်စာ
ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၀ ၊ ၀၉-၄၂၈၃၀၃၄၆၈
NFPE Learning Center
NFPE Learning Centers
Total Visit : 33281
Total Hits : 90245
Building 52, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.
Tel: +95-067-430162, +95-067-430498
Copyright © 2015 - Ministry of Education . All Rights Reserved.